Madaxweynaha Puntland oo magacaabay agaasimaha cusub ee madaxtooyada - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo magacaabay agaasimaha cusub ee madaxtooyada
March 3, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Agaasimaha cusub ee madaxtooyada Maxamed Cabdiladiif Yuusuf. [Isha Sawirka: Facebook]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Maxamed Cabdiladiif Yuusuf u magacaabay agaasimaha cusub ee madaxtooyada, sida ilo-xog ogaal ah ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Agaasimaha cusub ayaa kasoo shaqeeyay mid kamid ah haayadaha gargaarka ee ka howlgala gudaha Soomaaliya.
Maxamed Cabdiladiif Yuusuf ayaa badali doona Cabdinaasir Biixi Soofe, kaasoo labadii sanno ee u dambeysay xafiiska joogay.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Tirada dhimashada dadka ku sumoobay biyo ay ka cabeen ceel biyood kuyaala gobolka Bari ayaa gaartay ilaa 10 qof, sida ay sheegeen masuuliyiinta. Abshir Maxamuud oo ah guddomiye ku xigenka deegaanka Timirshe oo [...]